Ahintasɛm Kronkron—Apam Ahorow Daa Aseni a Wɔahyɛ Ne Ho Bɔ no Adi (Genesis 3:15) | Bɛn Yehowa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
‘Onyankopɔn Nyansa Ahintasɛm Kronkron’
1, 2. ‘Ahintasɛm kronkron’ bɛn na ɛsɛ sɛ ɛho hia yɛn?
AHINTASƐM! Esiane sɛ ahintasɛm yɛ nwonwa, ɛyɛ anigye, na ɛyɛ ahodwiriw nti, ɛtaa yɛ den ma nnipa sɛ wɔbɛkata so. Nanso, Bible ka sɛ: “Onyankopɔn anuonyam ne asɛm so hintaw.” (Mmebusɛm 25:2) Yiw, sɛ́ Otumfo Pumpuni ne Ɔbɔadeɛ no, Yehowa de nneɛma bi hintaw adesamma kosi sɛ ne bere bedu ma wayi no adi.
2 Nanso, ahintasɛm bi wɔ hɔ a ɛyɛ anigye na ɛyɛ nwonwa a Yehowa ayi no adi wɔ N’asɛm mu. Wɔfrɛ no ‘Onyankopɔn pɛ ahintasɛm kronkron.’ (Efesofo 1:9) Ɛho ade a wubesua no bɛma woanya nneɛma pii asen biribi a worepɛ ahu kɛkɛ a wubehu. Ahintasɛm yi a wubehu no betumi de wo akɔ nkwagye mu, na ebetumi ama woanya Yehowa nyansa a enni ano no mu nhumu bi.
Woyi no Adi Nkakrankakra
3, 4. Ɔkwan bɛn so na nkɔmhyɛ a wɔyɛɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Genesis 3:15 no ma yenyaa anidaso, na ahintasɛm, anaa ‘ahintasɛm kronkron’ bɛn na ɛwom?
3 Bere a Adam ne Hawa yɛɛ bɔne no, ebetumi aba sɛ ɛyɛe sɛnea Yehowa atirimpɔw a ɛne sɛ ɔbɛdan asase paradise a nnipa a wɔyɛ pɛ te so no asɛe no. Nanso, Onyankopɔn dii asɛm no ho dwuma ntɛm ara. Ɔkae sɛ: “Mede ɔtan mɛto wo [ɔwɔ no] ne ɔbea no ntam, ɛne w’asefo ne n’asefo ntam. Ɔno na ɔbɛbɔ wo ti; na wo nso woaka ne nantin.”—Genesis 3:15.
4 Ná nsɛm yi kyere adwene, na emu dɔ. Ná hena ne saa ɔbea yi? Ná hena ne ɔwɔ no? Ná hena ne ‘aseni’ no a ɔbɛbɔ ɔwɔ no ti no? Ná Adam ne Hawa betumi abɔ wɔn tirim kɛkɛ. Nanso, Onyankopɔn nsɛm no maa nnipa baanu a wɔanni nokware no asefo biara a wobedi nokware no nyaa anidaso. Ná trenee bedi nkonim. Ná Yehowa atirimpɔw bɛbam. Ɔkwan bɛn so? Ná ɛyɛ ahintasɛm ampa! Bible frɛ no ‘Onyankopɔn nyansa ahintasɛm kronkron, nyansa a wɔde siei.’—1 Korintofo 2:7.
5. Kyerɛkyerɛ nea enti a Yehowa yii n’ahintasɛm adi nkakrankakra no mu.
5 Ná Yehowa, sɛ́ ‘Obi a oyi ahintasɛm adi no,’ beyi nsɛm a ɛfa ahintasɛm yi mmamu ho a ɛho hia no adi awiei koraa. (Daniel 2:28) Nanso, na ɔbɛyɛ saa nkakrankakra. Sɛ yɛbɛyɛ mfatoho a, yebetumi asusuw sɛnea agya bi a ɔwɔ dɔ bebua ne ba abarimaa kumaa bere a obisa no sɛ, “Paapa, ɛyɛɛ dɛn na wɔwoo me?” no ho. Agya a onim nyansa ka nsɛm a abarimaa kumaa no betumi ate ase. Na bere a abarimaa no nyin no, agya no ka pii kyerɛ no. Saa ara na Yehowa hu bere a ne nkurɔfo betumi ate n’apɛde ne n’atirimpɔw ho adiyi ahorow ase no.—Mmebusɛm 4:18; Daniel 12:4.
6. (a) Atirimpɔw bɛn ho dwuma na apam, anaa nhyehyɛe di? (b) Dɛn nti na ɛyɛ nwonwa sɛ Yehowa ne nnipa bɛyɛ apam?
6 Ɔkwan bɛn so na Yehowa yii nneɛma a ɛte saa adi? Ɔnam apam, anaa nhyehyɛe ahorow so na eyii dodow no ara adi. Ɛda adi sɛ, wo ne obi ayɛ nhyehyɛe bi pɛn—sɛ ebia wobɛtɔ ofie bi anaasɛ ɔmmɔ wo bosea anaa ɔbɛbɔ wo hɔ bosea. Nhyehyɛe a ɛte saa no yɛɛ mmara kwan so bɔhyɛ a ɛkyerɛ sɛ mubedi asɛm no ho dwuma. Nanso dɛn nti na ɛsɛ sɛ Yehowa ne nnipa yɛ apam, anaa nhyehyɛe ahorow? Ɛyɛ ampa sɛ, n’asɛm yɛ ne bɔhyɛ ahorow ho adanse a edi mũ. Ɛte saa, nanso, mmere bi wɔ hɔ a Onyankopɔn afi ayamye mu de mmara kwan so nhyehyɛe ahorow ataa n’asɛm akyi. Saa apam nhyehyɛe a emu yɛ den yi ma yɛn nnipa a yɛnyɛ pɛ no nya biribi a emu yɛ den paa gyina so nya Yehowa bɔhyɛ ahorow mu ahotoso.—Hebrifo 6:16-18.
Apam a Ɔne Abraham Yɛe
7, 8. (a) Apam bɛn na Yehowa ne Abraham yɛe, na ahintasɛm kronkron no ho ntease bɛn na ɛma wonyae? (b) Ɔkwan bɛn so na Yehowa de nkakrankakra maa abusua a na Aseni a wahyɛ ne ho bɔ no befi mu aba no daa adi?
7 Bere a wɔpam onipa fii Paradise akyi bɛboro mfirihyia mpem abien no, Yehowa ka kyerɛɛ ne somfo nokwafo Abraham sɛ: “Nhyira na mehyira wo, na ɔdɔ na mɛma w’asefo adɔ sɛ ɔsoro nsoromma . . . na w’asefo mu na wobehyira asase so amanaman nyinaa, efisɛ woatie me nne.” (Genesis 22:17, 18) Ná eyi nyɛ bɔhyɛ kɛkɛ; Yehowa yɛɛ no mmara kwan so apam, na ɔde n’ankasa ntam a ommu so taa akyi. (Genesis 17:1, 2; Hebrifo 6:13-15) Hwɛ sɛnea ɛyɛ nwonwa sɛ Amansan Hene no ayɛ nhyehyɛe ankasa sɛ obehyira adesamma!
‘Mɛma w’asefo ayɛ bebree sɛ ɔsoro nsoromma’
8 Abraham apam no daa no adi sɛ Aseni no bɛba sɛ onipa, efisɛ na ɔbɛyɛ Abraham aseni. Nanso, na ɔbɛyɛ hena? Bere kɔɔ so no, Yehowa daa no adi sɛ wɔ Abraham mma mu no, Isak mu na Aseni no befi aba. Wɔ Isak mma baanu no mu no, wɔpaw Yakob. (Genesis 21:12; 28:13, 14) Akyiri yi, Yakob kaa nkɔmhyɛ nsɛm yi guu ne mmabarima 12 no biako so sɛ: “Ahempoma remfi Yuda nsa, na mmarahyɛ poma remfi n’anan ntam, kosi sɛ ɛsodifo a aman bɛyɛ osetie ama no no bɛba.” (Genesis 49:10) Afei de na wɔabehu sɛ Aseni no bɛyɛ ɔhene, nea obefi Yuda abusua mu!
Apam a Ɔne Israel Yɛe
9, 10. (a) Apam bɛn na Yehowa ne Israel man no yɛe, na ahobammɔ bɛn na apam no de mae? (b) Ɔkwan bɛn so na Mmara no ma ɛdaa adi sɛ adesamma hia agyede?
9 Wɔ afe 1513 A.Y.B. mu no, Yehowa yɛɛ nhyehyɛe a ɛbɔɔ kwan maa ahintasɛm kronkron no ho nsɛm foforo a wobeyi no adi. Ɔne Abraham asefo, Israel man yɛɛ apam. Ɛwom sɛ Mose Mmara apam yi nyɛ adwuma nnɛ de, nanso na ɛyɛ Yehowa atirimpɔw a ɔnam so de Aseni a wahyɛ ne ho bɔ bɛba no fã titiriw. Ɔkwan bɛn so? Susuw akwan abiɛsa ho hwɛ. Nea edi kan, na Mmara no te sɛ ɔfasu a ɛyɛ den. (Efesofo 2:14) Ne trenee mmara no yɛe sɛ ɔfasu a na etwa Yudafo ne Amanaman mufo ntam. Enti Mmara no boa bɔɔ abusua santen a na Aseni a wɔahyɛ ne ho bɔ no befi mu aba no ho ban. Esiane ahobammɔ a ɛte saa nti na na ɔman no da so wɔ hɔ bere a Onyankopɔn bere dui sɛ wɔbɛwo Mesia no wɔ Yuda abusua mu no.
10 Nea ɛto so abien, Mmara no maa sɛnea na adesamma hia agyede no daa adi pefee. Sɛ́ Mmara a ɛyɛ pɛ no, ɛmaa sɛnea nnipa abɔnefo ntumi nni so koraa no daa adi pefee. Enti ɛmaa ‘mmara atotõatotõ kɔɔ so kosii sɛ aseni a wɔhyɛɛ ne ho bɔ no bɛba.’ (Galatifo 3:19) Mmara no ma wonyaa hokwan de mmoa bɔɔ afɔre pataa bɔne kosii bere bi. Nanso, sɛnea Paulo kyerɛwee no, esiane sɛ “anantwinini ne mpapo mogya ntumi nyi bɔne” nti, na saa afɔre ahorow yi yɛ Kristo agyede afɔre no sunsuma ara kwa. (Hebrifo 10:1-4) Wɔ Yudafo anokwafo a na wɔwɔ hɔ saa bere no fam no, apam no bɛyɛɛ wɔn ‘yɛnfo a ɛkyerɛ wɔn Kristo so kwan.’—Galatifo 3:24.
11. Anidaso a ɛyɛ anigye bɛn na Mmara apam no maa Israel nyae, nanso dɛn nti na anidaso no bɔɔ ɔman mũ no nyinaa?
11 Nea ɛto so abiɛsa, saa apam no maa Israel man no nyaa anidaso a ɛyɛ anigye. Yehowa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, sɛ wodi apam no so a, wɔbɛyɛ “asɔfo ahemman ne ɔman kronkron.” (Exodus 19:5, 6) Awiei koraa no, honam fam Israelfo na wɔbɛyɛɛ asɔfo ahemman a ɛwɔ soro no mufo a wodi kan. Nanso, sɛ́ ɔman no, Israel tew atua tiaa Mmara apam no, poo Aseni a ɔne Mesia no, na wɔhweree saa anidaso no. Ɛnde, na henanom na wɔbɛsɔ so ma asɔfo ahemman no dodow adu? Ná abusuabɔ bɛn na ɛbɛda ɔman a wɔahyira wɔn no ne Aseni a wɔahyɛ ne ho bɔ no ntam? Ná wobeyi ahintasɛm kronkron no ho nsɛm yi adi wɔ Onyankopɔn bere a ɛsɛ mu.
Dawid Ahenni Apam No
12. Apam bɛn na Yehowa ne Dawid yɛe, na Onyankopɔn ahintasɛm kronkron no ho ntease bɛn na ɛma wonyae?
12 Wɔ afeha a ɛto so 11 A.Y.B. mu no, Yehowa kaa ahintasɛm kronkron no ho asɛm bio bere a ɔyɛɛ apam foforo no. Ɔhyɛɛ Ɔhene Dawid nokwafo no bɔ sɛ: “Mɛma w’aseni . . . so w’akyi, na mama n’ahenni atim. . . . Na mama n’ahenni agua atim akosi daa.” (2 Samuel 7:12, 13; Dwom 89:3) Afei de na wɔama Aseni a wɔahyɛ ne ho bɔ no anato abedi Dawid abusua mu. Nanso, so na onipa bi nniso betumi ‘atra hɔ daa’? (Dwom 89:20, 29, 34-36) So na ɔhene a ɔyɛ onipa a ɔte saa betumi agye adesamma afi bɔne ne owu mu?
13, 14. (a) Sɛnea Dwom 110 kyerɛ no, bɔ bɛn na Yehowa hyɛɛ ne Hene a wasra no no? (b) Ɛdefa Aseni a na ɔreba no ho no, nsɛm foforo bɛn na wɔnam Yehowa adiyifo so daa no adi?
13 Wɔde honhom kaa Dawid ma ɔkyerɛwee sɛ: “[Yehowa, NW] asɛm a osee me wura ni: Tra me nifa kosi sɛ mede w’atamfo mɛyɛ wo nan ase ntiaso. [Yehowa, NW] aka ntam, na ɔrennu ne ho: Woyɛ daapem sɔfo, Melkisedek dibea so.” (Dwom 110:1, 4) Dawid nsɛm no faa Aseni anaa Mesia a na wɔahyɛ ne ho bɔ no ho tẽẽ. (Asomafo no Nnwuma 2:35, 36) Ná Ɔhene yi renni ade wɔ Yerusalem, na mmom ɔsoro, Yehowa “nifa.” Ɛnyɛ Israel asase so nko na na ɛno bɛma wanya so tumi, na mmom asase nyinaa. (Dwom 2:6-8) Woyii biribi foforo adi wɔ ha. Hyɛ no nsow sɛ Yehowa kaa ntam sɛ Mesia no bɛyɛ ‘sɔfo wɔ Melkisedek dibea so.’ Te sɛ Melkisedek a ɔsomee sɛ ɔhene ne ɔsɔfo wɔ Abraham bere so no, Onyankopɔn na na ɔbɛpaw Aseni a ɔreba no tẽẽ sɛ Ɔhene ne Ɔsɔfo!—Genesis 14:17-20.
14 Mfe pii a etwaam no mu no, Yehowa nam adiyifo so yii ahintasɛm kronkron no ho nsɛm foforo adi. Sɛ nhwɛso no, Yesaia daa no adi sɛ na Aseni no bewu afɔrebɔ wu. (Yesaia 53:3-12) Mika kaa baabi a na wɔbɛwo Mesia no ho asɛm siei. (Mika 5:2) Daniel hyɛɛ bere pɔtee mpo a na Aseni no bɛba ne ne wu ho nkɔm.—Daniel 9:24-27.
Woyii Ahintasɛm Kronkron no Adi!
15, 16. (a) Ɔkwan bɛn so na Yehowa Ba no bɛyɛɛ obi a “ɔbea woo no”? (b) Dɛn na Yesu nya fii n’awofo a wɔyɛ nnipa no hɔ, na bere bɛn na ɔbae sɛ Aseni a wɔahyɛ ne ho bɔ no?
15 Ɔkwan a na saa nkɔmhyɛ ahorow yi bɛfa so abam no yɛɛ ahintasɛm kosii sɛ Aseni no ankasa bae. Galatifo 4:4 ka sɛ: “Bere no wiee odu no, Onyankopɔn somaa ne ba a ɔbea woo no ma wɔwoo no mmara ase.” Wɔ afe 2 A.Y.B. mu no, ɔbɔfo bi ka kyerɛɛ Yudani baabun bi a ne din de Maria sɛ: “Hwɛ, wubenyinsɛn, na woawo ɔbabarima, na woato ne din Yesu. Ɔbɛyɛ ɔkɛse, na wɔafrɛ no nea ɔwɔ sorosoro no ba; na [Yehowa, NW] Nyankopɔn de n’agya Dawid ahengua bɛma no. . . . Honhom Kronkron bɛba wo so, na nea ɔwɔ sorosoro no ahoɔden abɛkata wo so; enti na ade kronkron a wobɛwo no, wɔbɛfrɛ no Onyankopɔn ba.”—Luka 1:31, 32, 35.
16 Akyiri yi, Yehowa yii ne Ba no nkwa fii soro bɛhyɛɛ Maria awotwaa mu ma ɔbɛyɛɛ obi a ɔbea woo no. Ná Maria yɛ ɔbea a ɔnyɛ pɛ. Nanso, Yesu annya sintɔ biara amfi ne ho, efisɛ na ɔyɛ “Onyankopɔn ba.” Bere koro no ara, Yesu awofo a wɔyɛ nnipa, sɛ́ Dawid asefo no, ma Onyaa hokwan sɛ Dawid dedifo wɔ awo mu ne mmara kwan so nyinaa. (Asomafo no Nnwuma 13:22, 23) Wɔ Yesu asubɔ mu wɔ afe 29 Y.B. mu no, Yehowa de honhom kronkron sraa no kae sɛ: “Oyi ne me dɔba a ɔsɔ m’ani.” (Mateo 3:16, 17) Awiei koraa no, na Aseni no aba! (Galatifo 3:16) Ná bere adu sɛ woyi ahintasɛm kronkron no ho nsɛm pii adi.—2 Timoteo 1:10.
17. Ɔkwan bɛn so na wɔma yehuu nea Genesis 3:15 kyerɛ?
17 Wɔ Yesu som adwuma no mu no, ɔma yehuu ɔwɔ a Genesis 3:15 ka ne ho asɛm no sɛ ɔne Satan, ne ɔwɔ no asefo no sɛ Satan akyidifo. (Mateo 23:33; Yohane 8:44) Akyiri yi, wɔdaa sɛnea wobebubu eyinom nyinaa afebɔɔ no adi. (Adiyisɛm 20:1-3, 10, 15) Na wɔdaa no adi sɛ ɔbea no ne “ɔsoro Yerusalem,” Yehowa soro ahyehyɛde a ɛte sɛ ɔyere a honhom abɔde na wɔwom no. *—Galatifo 4:26; Adiyisɛm 12:1-6.
Apam Foforo No
18. “Apam foforo” no atirimpɔw ne dɛn?
18 Ebia asɛm a woyii no adi a ɛyɛ nwonwa sen biara ne nea ɛbae anadwo ansa na Yesu rebewu, bere a ɔkaa “apam foforo” no ho asɛm kyerɛɛ n’asuafo anokwafo no. (Luka 22:20) Te sɛ Mose Mmara apam a edii kan no, na apam foforo yi bɛma wɔanya “asɔfo ahemman.” (Exodus 19:6; 1 Petro 2:9) Nanso, na ɛnyɛ honam fam man bi na saa apam yi de besi hɔ, na mmom honhom fam de, “Nyankopɔn Israel,” a Kristo akyidifo anokwafo a wɔasra wɔn nkutoo na wɔwom no. (Galatifo 6:16) Na apam foforo no mufo yi ne Yesu de nhyira bɛbrɛ adesamma abusua!
19. (a) Dɛn nti na apam foforo no tumi nyaa “asɔfo ahemman”? (b) Dɛn nti na wɔfrɛ Kristofo a wɔasra wɔn no “abɔde foforo,” na nnipa dodow ahe na wɔne Kristo bedi ade?
19 Nanso, dɛn nti na apam foforo no tumi nyaa “asɔfo ahemman” a wɔnam wɔn so behyira adesamma? Efisɛ sɛ anka ebebu Kristo asuafo no fɔ sɛ abɔnefo no, ɛnam Kristo afɔrebɔ no so de wɔn bɔne firi wɔn. (Yeremia 31:31-34) Sɛ wonya nya gyinabea a ɛho tew wɔ Yehowa anim pɛ a, ɔfa wɔn ka ne soro abusua no ho na ɔde honhom kronkron sra wɔn. (Romafo 8:15-17; 2 Korintofo 1:21) Enti wonya ‘awo foforo a ɛkɔ anidaso a wɔde asie ɔsoro mu.’ (1 Petro 1:3, 4) Esiane sɛ gyinabea a ɛkorɔn saa no yɛ foforo koraa ma nnipa nti, wɔfrɛ Kristofo a wɔasra wɔn no “abɔde foforo.” (2 Korintofo 5:17) Bible da no adi sɛ, awiei koraa no, nnipa 144,000 benya kyɛfa afi soro adi adesamma a wɔagye wɔn nkwa no so.—Adiyisɛm 5:9, 10; 14:1-4.
20. (a) Ahintasɛm kronkron no ho ade bɛn na woyii no adi wɔ afe 36 Y.B. mu? (b) Henanom na wobenya nhyira a wɔde hyɛɛ Abraham bɔ no bi?
20 Wɔn a wɔasra wɔn yi ne Yesu bɛyɛ “Abraham asefo.” * (Galatifo 3:29) Ná wɔn a wodii kan paw wɔn no yɛ honam fam Yudafo. Nanso, wɔ afe 36 Y.B. mu no, woyii ahintasɛm kronkron no fã foforo adi: sɛ Amanaman mufo, anaa wɔn a wɔnyɛ Yudafo nso benya kyɛfa wɔ ɔsoro anidaso no mu. (Romafo 9:6-8; 11:25, 26; Efesofo 3:5, 6) So na Kristofo a wɔasra wɔn no nkutoo ne wɔn a wobenya nhyira a wɔde hyɛɛ Abraham bɔ no bi? Dabi, efisɛ wiase nyinaa nya Yesu afɔrebɔ no so mfaso bi. (1 Yohane 2:2) Bere kɔɔ so no, Yehowa yii no adi sɛ “nnipakuw kɛse” a wɔn dodow nni ano benya wɔn ti adidi mu wɔ Satan nneɛma nhyehyɛe no awiei. (Adiyisɛm 7:9, 14) Wobenyan nnipa foforo pii a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtra ase daa wɔ Paradise!—Luka 23:43; Yohane 5:28, 29; Adiyisɛm 20:11-15; 21:3, 4.
Onyankopɔn Nyansa ne Ahintasɛm Kronkron No
21, 22. Akwan bɛn so na Yehowa ahintasɛm kronkron no da ne nyansa adi?
21 Ahintasɛm kronkron no yɛ “Onyankopɔn nyansa horow bebree no” dwumadi a ɛyɛ nwonwa. (Efesofo 3:8-10) Nyansa bɛn ara na Yehowa de hyehyɛɛ ahintasɛm yi, na afei ɔde yii no adi nkakrankakra no! Ofii nyansam susuw nnipa sintɔ ahorow ho, na ɔma wɔdaa nea ɛwɔ wɔn komam ankasa adi.—Dwom 103:14.
22 Yehowa daa nyansa a enni ano adi nso wɔ Yesu a ɔpaw no sɛ Ɔhene no mu. Yehowa Ba no di mũ koraa sen abɔde foforo biara wɔ amansan yi mu. Bere a Yesu traa ase sɛ onipa a ɔwɔ honam ne mogya no, ohuu amane pii. Ɔte nnipa haw ahorow ase yiye. (Hebrifo 5:7-9) Na Yesu mfɛfo adedifo no nso ɛ? Wɔasra mmarima ne mmea—a wɔpaw wɔn fii mmusua ne kasa horow nyinaa mu—wɔ mfehaha pii no mu. Ɔhaw biara nni hɔ a emufo no bi nhyiae na wonnyinaa ano pɛn. (Efesofo 4:22-24) Ɛbɛyɛ anigye sɛ wobɛtra ahene asɔfokuw a wɔwɔ mmɔborohunu yi nniso ase!
23. Hokwan bɛn na Kristofo wɔ wɔ Yehowa ahintasɛm kronkron no ho?
23 Ɔsomafo Paulo kyerɛwee sɛ: ‘Ahintasɛm kronkron no a efi wiase bere ne awo ntoatoaso no so hintawee no, wayi adi akyerɛ ahotefo.’ (Kolosefo 1:26) Yiw, Yehowa akronkronfo a wɔasra wɔn no abɛte ahintasɛm kronkron no ho nsɛm pii ase, na wɔaka nimdeɛ a ɛte saa ho asɛm akyerɛ nnipa ɔpepem pii. Hokwan bɛn na yɛn nyinaa wɔ sɛɛ yi! Yehowa ‘ama yɛahu ne pɛ ahintasɛm kronkron no.’ (Efesofo 1:9) Momma yɛnka ahintasɛm a ɛyɛ anigye yi ho asɛm nkyerɛ afoforo, na yɛmmoa wɔn nso mma wɔnhwehwɛ Yehowa Nyankopɔn nyansa a emu dɔ no mu!
^ nky. 17 ‘Onyamesom pa ahintasɛm kronkron’ no nso daa adi wɔ Yesu mu. (1 Timoteo 3:16) Na ayɛ ahintasɛm fi bere tenten sɛ ebia obi betumi akura ne mudi mu pɛpɛɛpɛ ama Yehowa anaa. Yesu maa mmuae no daa adi. Okuraa ne mudi mu wɔ sɔhwɛ biara a Satan de baa ne so mu.—Mateo 4:1-11; 27:26-50.
^ nky. 20 Yesu nso ne nkurɔfo koro yi ara yɛɛ ‘ahenni apam.’ (Luka 22:29, 30) Yesu nam saayɛ so ne “kuw ketewa” yi yɛɛ nhyehyɛe sɛ wɔne no bedi ade wɔ soro sɛ Abraham aseni no fã a wɔto so abien.—Luka 12:32.
Yohane 16:7-12 Ɔkwan bɛn so na Yesu suasuaa sɛnea N’agya yi nokware adi nkakrankakra no?
1 Korintofo 2:6-16 Dɛn nti na nnipa pii ntumi nte Yehowa ahintasɛm kronkron no ase, na ɔkwan bɛn so na yebetumi ate saa ahintasɛm ahorow yi ase?
Efesofo 3:10 Hokwan bɛn na Kristofo wɔ wɔ Onyankopɔn ahintasɛm kronkron no ho?
Hebrifo 11:8-10 Ɛwom sɛ na gyidifo a wɔtraa ase tete no nte ahintasɛm kronkron no mu nsɛm nyinaa ase de, nanso ɔkwan bɛn so na ɛwowaw wɔn?
Tie Onyankopɔn​—Waka Ntam a Ɛso Bɛba Wo Mfaso
What can we learn from God’s promises, sworn oaths, and covenants?